25 जंगल भेटिन्छ, जसबाट रक्सीहरू चिसो चल्छन्
जंगल एक ठाउँ हो जहाँ यो दिन र रात्री भयानक हुन सक्छ। यही कारणले प्रायः विभिन्न डरावनी र रोमाञ्चक कार्य-थ्रिलर्समा कार्यको स्थानको रुपमा रोजिएको छ।
निस्सन्देह, अधिकांश अवस्थामा, जीवनमा, वन परिवारको पैदल यात्राको लागि एक महान स्थान हो। तर यो समयको लागी समयको लागि हो - जबसम्म तपाईले जंगली चीजहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ जुन यस सूचीबाट खोज्नु पर्दछ ...
1. बेबी गुडिया
सामान्यतया, गुडिया प्यारा खिलौनेहरू छन् तर सबै होइन। र यदि तिनीहरू अझै शरीर छैन ... एक परिवारले बाटो पत्ता लगाउनको लागि भाग्यशाली थिएन, जसको साथ बच्चाको दैनिक बाटो चलाउँछ, गुड़ियाको गुड सिर। न त ट्रंक, न त नजिकको कुनै कचरा फेला परेन। र अर्को दिन, र हेड गायब भयो। केवल प्रश्नहरू बाँचिरहेका छन्: कसले फेंक्यो? उसले किन यो गरिरहेको थियो? त्यो कहाँ गए?
सान्टा क्रुज शहर भन्दा टाढा, पर्यटक नदी वाल्फले ग्रोस्टोन फेला पारेको छ जसमा नाम "मेरी होम्स" उत्कीर्ण भएको थियो। पछि यो पछि फर्केर गयो, यो स्मारकले कब्रिस्तानबाट हरायो जहाँ महिलालाई दफन गरियो। तिनको जीवनको दौडान मरियम एक वेश्या थियो। होलमले 1898 मा नशेको जहर भएको मरे।
उनको बारेमा एक 12 वर्षीय केटाले केवल सामाजिक सञ्जालहरुमा मात्र भन्न सकेन। न त पुलिस, न त आमाबाबुले लगभग पूर्ण रूपले बिच्छेदन गरी बेघर मानिसलाई घृणित शरीरको बारेमा कुरा गर्छन्, बोल्न डराए।
रक्त र हड्डिहरु
सँगी पर्यटकहरूको कम्पनी दुई पटक भाग्यमानी थिएन। एउटी केटीले तिनलाई केही पर्ची लगाए। यो एक हिरणको रगत थियो जसको उल्टो भाग एक रूखमा लियो। अर्को केटी प्रायः हड्डीमा फेला पर्यो, जसमा तिनले घर जाने निर्णय गरे। उनको अचम्म कल्पना गर्नुहोस् जब उनी फेला पारे कि यो एक मानव ब्रशको भाग थियो ...
एक बिंदुमा, दक्षिण क्यारोलिनामा सबै समाचार रिपोर्टहरू जोशमा छोराछोरीलाई लुगा लगाउँदा खेतको बारेमा टिपोट गर्दै थिए। राज्य को धेरै युवा निवासीहरु द्वारा जानकारी पनि पुष्टि भयो। प्रहरीले यो मामलालाई पनि खोजी गर्न खोज्यो, तर पत्ता लगाउने कुनै प्रमाण र सकेन।
रोको शुरुवातले फ्याक्टेड व्यक्ति नजिकैको एक घण्टा बिताउन थाल्नुभयो, जसमा उसले गल्तिको पार्कको जंगलमा पार्यो। यसले अन्य पुलिसकर्मी लामो समय सम्मको सीढ़ी संग दृश्यमा आउन धेरै समय लागेन। यो बाहिर बाहिर, पार्क रेंजर नियमित आत्महत्या पत्ता लगाउँछन्। किनकी अर्को शब्द कुनै अब आश्चर्यजनक छैन।
र तपाईंले सोच्नु हुनेछ यदि तपाईंले लैटिनमा अज्ञात अचम्मको साथ बर्फ-आवरण ग्लेडमा नयाँ शिलालेख फेला पार्नुभयो भने अर्कोतिर कुन ट्रेस छैन?
8. टेडी भालू
अर्को रेंजर, जंगल को जांच, एक अवैध रूप देखि राखिएको शिविर पाया। निरीक्षणको बेला तिनले कपडे, सुत्नका थलो, धेरै खानेकुरा र टेडी भाडा पाए। एकै समयमा, सबै कुराले संकेत गर्यो कि एक मात्र शिविर शिविरमा रह्यो। यो हुन सक्छ - रहस्य।
9। हेड रेन्डर
हिरणको बाटोमा पाईलोस्टोनबाट रेंजर फेला पर्यो। कम्पास को भाग पुरा र पुरा तरिकाले बरकरार थियो। पार्क को परिचालक पछि मलाई भन्यो कि उनले मृत जनावरहरु को प्रमुख देखि पहिले देखि देखे, तर तिनीहरूले यस्तो कभी नहीं देखा ... राम्रो!
10. मोटोक्रस टेप
जंगलमा सुत्न ठाउँ छनौट अत्यन्तै सम्भावित हुनुपर्छ। अन्यथा, यो कम्पनी जस्तै, तपाईं रक्त को निशान, दागहरु र स्कच को एक स्कूप मा ठोकर गर्न सक्नुहुन्छ। हाहाकार, वर्षाको कारण, भयानक पातहरू पछिको रात बिताउन आवश्यक थियो, तर चाँडै सम्भव भएसम्म मित्रहरूले पुलिस रिपोर्ट पठाए।
अर्को कम्पनीले झन्डै नजिकैको 22 वर्षीया केटी पार्यो। माछा मा दुर्भाग्यपूर्ण अनुहार, उनको खुट्टाहरू भागेका थिए, तर तिनी सास फेर्न थालिन्। जवानहरूले 911 भनिन्, र पछि जान्थे कि एक मित्र संग एक केटी झरना देखि गिर्यो। दुर्भाग्यवश, मित्र साथी जीवित हुन सकेन - उनको शरीर धेरै दसौं मीटरमा फेला पर्यो।
12. मेथिम्पेटामिन प्रयोगशाला
एकजना मित्रहरू जंगल गए। युवाहरूले एक उपयुक्त स्थान पाएका थिए, बसेर बियर पियौं र अचानक थाहा पाएको थियो कि कारहरु थोरै थोरै ठाउँमा पुगेर गए। केटाहरू त्यहाँ गए के त्यहाँ गए। यो बाहिर गए कि पड़ोसी शिविर सशस्त्र मान्छे द्वारा संरक्षित गरिएको थियो, र तिनीहरूले पर्यटकहरूलाई पक्राए। साथीहरू भाग्यशाली थिए र तिनीहरूले भाग्न सफल थिए। त्यसपछि मात्र केटाहरूले एहसास गरे कि वनको जंगलमा तिनीहरूले गल्तीमा नराम्रोबारटोरियममा ठोकरहेका थिए।
टापुको बीचमा, तीन मित्रहरूले सुनको निपल्ससँग एउटा मूर्ति फेला पारे। उनको रबडा रबड जूताहरू पछि, मोमबत्तिहरूसँग कुर्सी खडा भयो। डरलाग्दो छ कि ती अजीब अनुष्ठानहरूले अचानक सफा गर्न फर्कन सक्थे, मित्रहरू भाग्यो। समयमा, एक उत्सुक जवान मानिसले वेदीमा फर्कने निर्णय गरे, तर पहिले देखेको केही पनि छैन, अब त्यहाँ थिएन।
जंगलमा विच्छेदन निकायका भागहरू फेला पार्न डरलाग्दो छ। उदाहरण को लागि, एक औंला को पेड को ट्रंक मा जाल्यो ...
15. मानिस र चट्टान
जंगल को माध्यम ले हिड रहेको छ, कम्पनी एक चोटी मा ठोकर खाई। दायाँका साथीहरूको छेउमा दायाँको सिल्जेटलाई थाहा थियो। उहाँ उनीहरूको फिर्तामा उभिएका थिए र वरिपरि घुम्न पनि सोच्नु भएन। चाँडै, एक साथीले सडकमा त्यहि सिल्हाउनेट देखे। अजनबी अहिलेसम्मको रूपमा उभिएको थियो र सार्नको लागि योजना थिएन।
16. हराएको जुत्ताहरू
अर्को कथाको नायकहरूले जंगलमा हराएको बच्चाहरूलाई हेर्न खोजे। जंगलमा, तिनीहरू घुमाएका स्पियर र खिलौनेहरूमा आउँथे। तिनीहरू पक्का थिए कि उनीहरूले हराएको जुत्ताहरू फेला पार्न खोजे - सबै कुरा त्यहि संकेत देखाउँछन्। तर त्यसोभए अन्य कल्याणहरू भनिन्छ र बच्चाहरूलाई पहिले नै फेला परेको थियो - त्यहाँ 20 किलोमिटरको ठाउँ जहाँ नायकहरू थिए।
Yellowstone एक ठूलो पार्क हो, र तपाईं यहाँ सबै केहि पाउन सक्नुहुन्छ। घोडाको खोपड़ी, उदाहरणको लागि, ताल मा एक जना पर्वतको पर्वत र माछा मा, कुन फिल्मको नकारात्मकता प्रतिक्षा भएको छ ...
नक्कली आँखाका साथ तांबेको मुखौटा र मुखले यात्रीलाई दियो। ठीक छ, संग्रहालयमा उनीहरूलाई भनिएको थियो कि विशेष मूल्यको खोजले प्रतिनिधित्व गर्दैन। प्राय: सम्भवतः यो कलाको प्रविधिको लागि हालै विशेष गरी बनाइएको थियो।
1 9। ब्याकप्याक
जंगलमा खेल्दै, बच्चाहरूले खूनी ब्याकप्याकलाई किताबको साथमा लिम्बुहरू पहिले नै बसेर बसेका थिए, र एक ल्याप्टप भित्र। तिनीहरू तुरुन्तै आफ्ना आमाबाबुको खोजीको बारेमा कुरा गरिरहेकी थिइन्, तर जब तिनीहरू वयस्कहरूसँग फर्किए, उनीहरूको आफ्नै पछाडी तर केही पनि थिएनन्।
यो एक भयानक कथा भन्दा दुखी छ: अमेरिकी वन सेवाले जानकारी पाएको छ कि कसैले पेटीमा बाँधिएको खोपड़ीमा गोलीको साथ कुत्ते कंकाल पाए।
21. एक crowbar
तर यो जंगलमा स्क्रैप पत्ता लगाउन डराउँदैन, जस्तै एक व्यक्तिले यसलाई भुवाउँछ। एक जीवविज्ञानीले यो तस्वीर देख्यो। अजनबीको भीडबारको प्रशंसा गर्दै मानिस चाँडै गाडीमा फर्किए र बाहिर गए।
यदि तपाईंले जंगलमा एउटा प्लान पाउनुभयो भने "के नदीमा एउटा केटी, पानीमा उनको रगत" लेख्नु हुनेछ?
कुनै पनि राष्ट्रिय रिजर्भमा बाँकी रहेका, इतिहासको नायकहरू संगीत सुन्नुभयो - जो कि प्राय: आइसक्रीम वानमा खेल्छ। तिनीहरू आवाजमा गएर तुरुन्तै सूचना दिएनन् कि साँपको कोर सम्पूर्ण बाटो सँगै बस्छ। भयभीत, मानिसहरू कारमा फर्किए, र यस बीचको संगीतले अभिषेक गर्यो।
जंगल को माध्यम ले टहलने को समयमा जवान मान्छे ले एक मित्र को रूप मा सोचा। उहाँ नमस्कार भन्न सफा गर्न भाग्यो, तर साथीको सट्टा उसले एक जना मानिसलाई एक चक्कु संग एक हत्यारा को हत्या गरे। ती ग्लेडका रूपमा चाँडै, तिनी र उहाँका साथीहरू शायद जीवनमा कहिल्यै भागिन सकेनन्।
सामान्य गल्तीको समयमा, रेंजरले दूरीमा धूम्रपान गरे। नजिकको नजिक, तिनले नग्न जनजातिहरूसँग जनावरहरूको पोशाकमा लुगा लगाइएका मानिसहरूको समूहको जाँच गरे। यो थाहा छैन कि उनीहरू त्यहाँ त्यहाँ गरिरहेका थिए, तर सबैलाई यो घटनाको परिस्थिति स्पष्ट नभएसम्म हिरासतमा लिएको थियो।
30 स्टोर संकुलहरू, जुन अयोग्यता मात्र टाढा बन्द छ!
37 वटा चीजहरू जुन तपाई 30 बर्ष पछि अफसोस गर्न थाले
36 वर्ष पछि गर्भपात पछि बाँकि केटी, केटीको संग भेट भयो!
28 डरलाग्दो कालो र सेतो फोटोहरू
12 आदर्श गर्भनिरोधकहरू जुन नजिकको भविष्यमा देखा पर्नेछ
यो 25 एल्बम स्विडिश संगीतकारहरूको आवरणले तपाईंको दिन बनाउनेछ!
60 फोटो जो हाम्रो बचपन जस्तो देखिन्छ!
8 जना व्यक्तिहरू जसले तपाईंलाई आश्चर्य गर्दछन्!
TOP-20 सबै भन्दा महंगी आधुनिक विवाहहरू
30 चिन्हहरू जुन तपाईंले आफ्नो सबैभन्दा राम्रो मित्र भेट्नुभएको छ
टाइटैनिकको मृत्युको सबैभन्दा नयाँ संस्करण र सबैभन्दा प्रभावकारी तथ्य!
35 कैरियर चालहरू जुन तपाईंले थाहा भएन
स्नानको लागि ग्लास विभाजन
तल जैकेट कन्सोल - सर्दिया 2017
बेडरूममा मिनिमेस्ट शैली
सीरियाको ह्यामरले कति जीवन बिताएको छ?
कपालको आवाजको लागि मतलब छ
राजकुमार हैरीले विवाह गर्नुअघि उनको "स्ट्याग पार्टी" को व्यवस्था गर्दैछ?
ओभरहरू बिरामी छन् - सबै सम्भावित कारणहरू
पीचबाट मिथ - मीठा नाचिकाको स्वादिष्ट र असामान्य व्यञ्जनहरू
जेनिफर लोपेज र एलेक्स रोड्रिजुजद्वारा फ्रान्सेली छुट्टियाँ
एक फ्राइकिङ प्यान मा पोर्क चोप्स - नुस्खा
Pavlov Posad शॉल देखि वस्त्र
अभिनेता च्यानिङ टटम ले लास भेगासमा एक अनोखी स्ट्रिपटीज कार्यक्रम सिर्जना गर्नेछ!
एक अक्टोपिक गर्भावस्था को लक्षणहरू के हुन्?
कसरी सही तरिकाले सुरक्षित राख्न सकिन्छ?
सर्दमा फोटोशूट सडकमा - विचारहरू